ဂရိလေဆိပ် ILS (LAND သင်တန်းများ / FREQUENCY)
ဂရိလေဆိပ် ILS (LAND သင်တန်းများ / FREQUENCY) 11 လအတွင်း3weeks ago #1473
ငါ့နာမကိုအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အမေကို အသုံးပြု. ပြီ FSX ယခုလအနည်းငယ်အဘို့ Deluxe Edition ကို။ ငါဂရိလေဆိပ်၏နံပါတ်မှာဆင်းသက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးသူတို့ထဲကခဲမဆို ILS SETTINGS LAND သင်တန်းများနှင့် FRQUENCY SETTINGS ie ရှိသည်။ မည်သူမဆိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သောမည်သည့်အပ်ဒိတ်သိပါဘူး။ ငါအမြင်အာရုံဒီတော့လုပ်နေသဖြင့်ဆင်းသက်ခဲ့ကြပေမယ့်မရရှိနိုင်လျှင်ငါ ILS setting များကို အသုံးပြု. ၏ထို option ရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ်
0.143 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်